Download Managers - Page6- မြန်မာမိသားစုဖိုရမ်
ပြန်စာ - Download Managers
IDM နဲ့ ဒေါင်းလုပ်ချရမှာ အဆင်မပြေတဲ့သူတွေ ဥပမာ-Full version မဖြစ်လို့ ပဲ ဖြစ်ဖြစ် crack file မရှိလို့ပဲဖြစ်ဖြစ် serial key တွေ တောင်းနေလို့ပဲဖြစ်ဖြစ် download ချတဲ့အခါ အဆင်မပြေတဲ့ အခါ ကျနော် အခု ပေးထားတဲ့ Download YouTube Videos + Flash Video Downloader / Download-Helper 12.8 လေးကို အသုံးပြုပြီး ဒေါင်းလုပ်ချနိုင်ပါတယ်...အောက်ကလင့်လေးကို အရင်နှိပ်လိုက်ပါ
အပေါ်ကပုံလေးအတိုင်းမြင်ရရင် Add to firefox ကိုနှိပ်ပြီး Add on လုပ်ပေးလိုက်ရုံပါပဲ ....ကိုယ်ဖွင့်ချင်တဲ့ youtube ကပဲဖြစ်ဖြစ် အခြား facebook ကတင်ထားတဲ့ Flv.file တွေကို ဖွင့်ပြီး Save လုပ်ပေးလိုက်ရုံပါပဲ ...အားလုံးပဲ အဆင်ပြေကြပါစေဗျာ
အောက်ပါအသင်းဝင် 11 ဦးတို့မှ မြန်အောင်သား အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
စနိုးလေး, မိုးတိန်, ရှင်းသန့်, arkaraung, AZM, bagothar85, g00gle, goldstar, laylwintbutterfly, yelinoo, zo
ကိုပဲခူးသားရေ IDM ကို update လုပ်လိုက်တာဘာမှလုပ်လို့ ရတော့ဘူး serial key has been blocked ဖြစ်နေတယ် ကူညီ ပါဦး.............................
အောက်ပါအသင်းဝင်4ဦးတို့မှ Thura Htet အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
မောင်သံသရာ, မြန်အောင်သား, yelinoo, zo
Originally Posted by Thura Htet
ကိုပဲခူးသားရေ IDM ကို update လုပ်လိုက်တာဘာမှလုပ်လို့ ရတော့ဘူး serial key has been blocked ဖြစ်နေတယ် ကူညီ ပါဦး.............................
ဒီပိုစ့်မှာ ပြောပေးထားတဲ့အတိုင်း Uninstall လုပ်ကြည့်ပါ အစ်ကို။ အဲဒါပြီးမှ အစ်ကို တင်ချင်တဲ့ဗားရှင်းကို အသစ်ပြန်တင်ပြီး Crack ထည့်ပါ။ အဲဒါဆို အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်။ အဆင်ပြေပါစေခင်ဗျာ...
$ညိုမင်းလွင်$, မောင်သံသရာ, မြန်အောင်သား, azp09, yelinoo, zo
26-04-2012, 07:56 PM
Internet Download Manager 6.11 Build5(23/4/2012)
ဧပြီလ ၂၃ ရက်နေ့မှာ ထွက်လာတဲ့ Version ပါ။ သူ့ဆိုက်မှာ သွားဒေါင်းလုဒ်လျှင်လည်း ရပါတယ်.. အဆင်ပြေပါစေခင်ဗျာ။
Internet Download Manager 6.11 Build5Setup Only (23/4/2012)
IDM 6.11 ( Crack Only)
အောက်ပါအသင်းဝင် 10 ဦးတို့မှ bagothar85 အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ဂျာကြီး, မိုးတိန်, မေမင်းဆက်(ပုသိမ်မြေ), မောင်သံသရာ, azp09, g00gle, kokomyomin, tu tu, yelinoo, zo
Internet Download Manager 6.11 Build7(2/5/2012)
မေလ ၂-ရက်နေ့မှာ ထွက်လာတဲ့ Version ပါ။ သူ့ဆိုက်မှာ သွားဒေါင်းလုဒ်လျှင်လည်း ရပါတယ်.. အဆင်ပြေပါစေခင်ဗျာ။
Internet Download Manager 6.11 Build7Setup Only (2/5/2012)
နီထွန်းဦး, ပလူးစ်, ပုထုဇဉ်, သန့်ဇင်ဌေး, ကျော်ထက်ချိန်, စောလွင်, မောင်သံသရာ, azp09, g00gle, kokomyomin, yelinoo, zo
ပို့စ်2ခုအတွက် 10 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
Orbit Downloader latest version လေးပါ update လည်းပေးနေတယ်http://www.orbitdownloader.com/download.htm
အောက်ပါအသင်းဝင်7ဦးတို့မှ Htunlin အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
မောင်သံသရာ, arkaraung, azp09, g00gle, tu tu, yelinoo, zo
Find More Posts by Htunlin
thein zaw min
ပို့စ်5ခုအတွက် 13 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
အဆင်ပြေရင် အင်တာနက်ဒေါင်းလုပ်တာတစ်ခုလောက်တင်ပေးကြပါအုံးခင်ဗျာ .. ရက်၃၀ ပဲသုံးလိုက်ရပါတယ်
မရတော့လို့ပါ ... ဒီဆိုဒ်မှာတင်ထားတာတော်တော်များများကလည်း ဒေါင်းလို့မရတော့လို့ပါ ..အဲ ရပြန်တော့လည်း
patch ဖိုင်ကျတော့ ဒေါင်းမရပြန်ပါဘူး ... ကျေးဇူးပြုပြီး တင်ပေးစေချင်ပါတယ်
အောက်ပါအသင်းဝင်4ဦးတို့မှ thein zaw min အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
thein zaw min ထံသို့စာချွန်လွှာပို့ရန်
Find More Posts by thein zaw min
အကိုရေ ဒီလင့်လေးမှာ ဒေါင်းလိုက်ပါနော် Internet Download Manager v6.11.8-BRD လေးပါ အဆင်ပြေပါစေခင်ဗျာ >> ဒီနေရာလေးမှာဒေါင်းပါ
အောက်ပါအသင်းဝင်4ဦးတို့မှ မြန်အောင်သား အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ပုထုဇဉ်, မောင်သံသရာ, yelinoo, zo
အောက်ပါအသင်းဝင်4ဦးတို့မှ decemberdec အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
စောလွင်, မောင်သံသရာ, မြန်အောင်သား, yelinoo
ပို့စ် 25 ခုအတွက် 75 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
IDM 6.12 build (18) 20/9/2012
Internet Download Managers 6.12 build (18) 20/9/2012 Full
ဒေါင်းလုဒ်ပြီး rar ဖိုင်ကို ဖြည်လိုက်ပါက .. အတွင်းထဲတွင် install note ကိုဖတ်ကြည့်ပါ .. အဆင်ပြေပါလိမ့်မည် ..
rar file password တောင်းပါက - myanmarfamily လို့ထည့်လိုက်ပါ ..
Last edited by gogogyi; 25-09-2012 at 04:07 PM..
အောက်ပါအသင်းဝင်6ဦးတို့မှ gogogyi အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
မောင်သံသရာ, bagothar85, lokasara, moekyal, tu tu, yelinoo
Find More Posts by gogogyi
IDM 6.12 Build (20) Full
Internet Download Manager 6.12 Build (20)
ဒေါင်းလုဒ် ပြီး rar ဖိုင်ကို ဖြည်ရင် Password တောင်းပါမယ် .. myanmarfamily လို့ ထည့်လိုက်ပါ .. ရလာတဲ့ ဖိုင်တွေထဲမှာ install note ဆိုတာ ကို ဖတ်ပြီး install လုပ်၍ အသုံးပြုနိုင်ပါသည် ..
rar file password = myanmarfamily
အောက်ပါအသင်းဝင်7ဦးတို့မှ gogogyi အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
သက်နိုင်, စောလွင်, bagothar85, g00gle, moekyal, tu tu, yelinoo
ပြန်စာ - IDM 6.06 နှင့် Mozilafirefox 4.0
ကျွန်တော idm download ဆွဲတာ mp3 တို့ mediafire တို့ စ သဖြင့် download ဆွဲတာ မြန်တယ် ဒါပေမယ့် youtube က idm download ဆွဲတာ တော်တော်လေး နှေးနေတာ ပုံမှန်တိုင်း ဆိုရင် mediafire download ဆွဲတာ 23MB ရှိတယ် youtube က download ဆွဲတာ 23MB ရှိတယ် အတူတူ ဆွဲတာကို ဘာဖြစ်လို့ youtube က download ဆွဲတာ နှေးနေတာ mediafire download ဆွဲတာ 23MB ရှိတယ် ဟာက 15မိနစ် ကြားတယ်ဆိုရင် youtube က download ဆွဲတာ 23MB ရှိတယ် အတူတူ ဆွဲတာကို 50 မိနစ် လောက် ကြာ တယ် အဲဒါ youtube က download ဆွဲတာ မြန်အောင် နည်းလေး ပြောပြ ပေးပါနော် ကျေးဇူးတင်းပါတယ်
အောက်ပါအသင်းဝင်မှ ဘာစီလိုနာ အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Find More Posts by ဘာစီလိုနာ
Idm 6.11 working 100%
IDM 6.11.8.1 Software . Rar File ထဲမှာ ဖိုင် သုံးခုပါပါတယ်. Installer, Crack , Key.
Installer ကို Run ပြီးရင် Crack လုပ်ပေးပါ. ပြီးရင် Register Key ထည့်ဖို့လိုပါတယ်. တချို့ က Register Key ကို မဖြည့်ပေးကြတော့. Registered မဖြစ်ဘူးဖြစ်နေတယ်. Key က notepad ထဲမှာ ရေးထားပါတယ်.
http://www.mediafire.com/?y68s2m3ognwkl8p (DOWNLOAD LINK)
Download မရရင် gizpzy@gmail.com ကို REQUEST လုပ်ပေးပါ. email ကနေတဆင့် ပို့ပေးပါမယ်.
အောက်ပါအသင်းဝင်5ဦးတို့မှ ChenMyae အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
စောလွင်, ဇေကြီး, အောင်ဗလ, g00gle, yelinoo
Find More Posts by ChenMyae
21-12-2012, 02:48 AM
install လုပ်နည်းကို notepad file နဲ့ ထည့်ပေးလိုက်ပါတယ် ..
rar file password က - myanmarfamily
အောက်ပါအသင်းဝင်5ဦးတို့မှ gogogyi အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
စောလွင်, မြင့်မိုရ်, g00gle, tu tu, yelinoo
အင်တာနက်ဒေါင်းလုတ်မန်နေဂျာ ၆.၁၄ v 3
အင်တာနက်ဒေါင်းလုတ်မန်နေဂျာ ၆.၁၄ V3ပါ။
Last edited by ko gyi aung; 01-01-2013 at 06:20 AM..
အောက်ပါအသင်းဝင်5ဦးတို့မှ ko gyi aung အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ဦးသိဝါနန္ဒ, စောလွင်, g00gle, tu tu, yelinoo
ကိုကြီးအောင်ရေ အင်တာနက်ဒေါင်းလုပ်ခ် မန်နေဂျာက ဘလောက့်လုပ်ထားတယ်ဆိုပြီး ဒေါင်းလိုမရဘူး ဖြစ်နေတယ်။ ပြန်ကြည့်ပေးပါအုန်းနော်။
ကိုကိုကြီးရေ IDM 6.14 အင်စတော်လ် လုပ်တာမှာ patch ကို အက်းမင်အနေနဲ Run ပါဆိုတာဘယ်လိုလုပ်ရတာလည်းမသိလို့ အသေးစိတ်ရှင်းပြပါလားခင်ဗျာ၊ သိပ် မလုပ်တတ်တော့ ရိုးရိုးအင်စတော်လ်ဘဲ လုပ်တတ်ပါတယ်။
အောက်ပါအသင်းဝင်မှ စောလွင် အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ဒါကိုယူပါ install ပြီးတာနဲ့သုံုံးလို့ရပြီ No patch / No Crack /No serial
အောက်ပါအသင်းဝင်3ဦးတို့မှ kyawminkhoung အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ဖန်ဆင်းရှင်, g00gle, yelinoo
Originally Posted by စောလွင်
အ ပေါ်ကလင့် ပြန်ပြင်ပေးထားပြီးပါပြီခင်ဗျာ။ဒီမှာလဲဒေါင်းလို့ရပါတယ်
စောလွင်, မြင့်မိုရ်, g00gle, kyawminkhoung, yelinoo
ကိုကြီးအောင်ရေ့ ဒေါင်းပြီးသွားပြီ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ နောင်လဲ ပညာကောင်းတွေ မျှဝေနိုင်ပါစေ။
ပို့စ် 65 ခုအတွက် 382 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
ကိုကျော်မင်းခေါင်ေ၇ No patch / No Crack /No serial လေ ပြန်တင်ပေပါလာ အခုမှတွေ့မိလို့ပါ ..
“တစ်ခါလွဲသော ပျော်ရသည်။ ဆယ်ခါလွဲသော မော်ရမည်။ အခါခါလွဲမှ တော်လှသည်:4::4:
Find More Posts by smlat88
Originally Posted by smlat88
မြင့်မိုရ်, g00gle, yelinoo
Originally Posted by kyawminkhoung
ကိုကျော်မင်းခေါင် ရေ... ရှိတော့ပြန်ဘူး တဲ့
No patch / No Crack /No serial ကို လိုချင်နေတာ။
ရောက်လာတာ နည်းနည်း နောက်ကျသွားလို့။
Last edited by မြင့်မိုရ်; 09-01-2013 at 05:46 PM..
Originally Posted by မြင့်မိုရ်
[color="green"]ကိုကျော်မင်းခေါင် ရေ... ရှိတော့ပြန်ဘူး တဲ့
ရောက်လာတာ နည်းနည်း နောက်ကျသွားလို့။:bh::bh:ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ..။
အောက်ပါအသင်းဝင်2ဦးတို့မှ kyawminkhoung အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
၇ှိဘူးးဟ ဘယ်နယ်လုတ် တင်လိုက်တာတုံးးတ၇က်တောင် မခံပါလာ..
Last edited by kyawminkhoung; 10-01-2013 at 05:24 AM..
အောင်ဗလ, မြင့်မိုရ်, ဖြိုးယံလေး, g00gle, mercury, smlat88
ပို့စ် 10 ခုအတွက် 17 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
ပြန်စာ - ကွန်ပျူတာဆိုင်ရာ တိုလီမုစများ
Find More Posts by ဘ၀သမား
IDM 6.15 Full Cracked
(စာမဖတ်ဘဲ လိုရင်းကို ဒေါင်းသွားလည်းရပါတယ် ..... ကျွန်တော် ဆက်ဖျီးဖျန်းမလို့ပါ)
လမ်းကြုံလို့ တင်ပေးလိုက်တာပါ ....... တော်တော်များများလည်း အသုံးပြုလက်စ-- အသုံးပြု လတ္တံ့ နေဆဲဖြစ်ကြမှာပါ။ မြန်မာဆိုဒ်တော်တော်များများမှာ တင်ထားတာလည်းရှိပါတယ် ..( တော်တော်များများလည်း လင့်ခ်တွေသေကုန်ပါပြီ ) တချို့ကလည်း ကီးမကိုက်လို့ .... ပက်ခ်ျမရိုက်လို့ .... ခရက် မစိုက်လို့ ...... အဆင်မပြေကြပါဘူး ..... ဒါလေးကတော့ မဆိုးဘူးဗျ အဆင်ပြေတယ် ဘာမှလုပ်စရာမလိုဘူး.. Activate ဖြစ်တယ်။ တစ်ခါတည်းတန်းသုံးလို့ရပါတယ် ....။ Defreeze အသုံးပြုထားတဲ့ အင်တာနက်ဆိုင် တွေမှာလည်း အဆင်ပြေနိုင်ပါတယ် ....... ။
Last edited by ငပေကြီး; 03-02-2013 at 01:30 PM..
အောက်ပါအသင်းဝင်မှ ငပေကြီး အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
အသင်းဝင်နေ့စွဲ: Mar 2013
ှုIDM 6.15b3 latest versionလေးပါ
Internet Download Manager (IDM) ကိုတော့ထွေထွေထူးထူး မိတ်ဆက်စရာမလိုလောက်တော့ပါဘူ။အားလုံးရင်းနှီးပြီးသာပါ။ Crack version လေးရလာလို့ဝေမျှသွားပါတယ်။
အောက်ပါအသင်းဝင်5ဦးတို့မှ နောင်နောင်စိုးဦး အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ငပေကြီး, ရန်လေး, တေလေငှက်, phoelapyaee, phyothuhein
Find More Posts by နောင်နောင်စိုးဦး
25-09-2013, 06:26 PM
Originally Posted by မြန်အောင်သား
လင့်လေးကို နှိပ်လိုက်တာ This add-on has been disabled by an administrator. လို့ပေါ်လာတယ်ကိုမြန်အောင်သားရေ..